स्वच्छ छवि बनाएका धेरै बैंकरहरु एकै साथ समातिए……. « Kathmandu Television HD
सिइयो, ज्योती विकास बैंक
बैंक अफ काठमाण्डौमा तत्कालिन अबस्थामा खोलाको जग्गा हाईवे छेउको जग्गा भनेर धितो राखी5करोड कर्जा प्रवाह भएको र पछि कर्जा खराब भई लिलाममा बिक्रि गर्न खोज्दा जग्गा नक्कली भएको थाहा पाएको सम्बन्धमा तत्कालीन CEO अजय श्रेष्ठ सहित 11 जना बैंकरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैंकिङमा अत्यन्त ईमान्दार अनि स्वच्छ छवि बनाएका धेरै बैंकरहरुलाई एकै साथ समातिएको छ । यो घटना पहिलो चै होईन। यस्तो जाली धितो राखी कर्जा प्रवाह भएमा trace निकाल्ने कर्मचारी, कर्जा प्रस्ताव बनाउने सहायक कर्मचारीदेखि कर्जा स्वीकृत गर्ने CEO समेत र यदि BOD मा जाने प्रस्ताव छ भने BOD member सहित बैंकिङ कसुरमा जेल जाने अबस्था छ।
जालसाजी गर्ने बदमासहरु मालपोतमा मिलेर blue print, trace र नक्कली लालपुर्जा समेत बताउँछन भने कतिपय अबस्थामा लालपुर्जा सक्कली तर अरु सबै कागजात नक्कली गराई एउटा ठाउँको जग्गा को blue print, trace अर्के ठाउँको बनाई पेश गर्छन। शाखाको कर्मचारीहरुले ध्यान पुर्याएन र Valuator ले negligence गरिदियो भने फाईल अघि बढ्छ। कहिले कहि शुरुवाती कर्मचारीहरुको अनी Valuator हरुको मिलोमतो पनि हुनसक्छ भने कतै माथिबाट बदमासी गरी तलको सोझा कर्मचारीलाई पदको दुरुपयोग गरी काममा लगाईएको हुन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा बैंकको माथिल्लो कर्मचारीले शंका उत्पन्न हुने कागजात देखे भने थाहा हुन्छ भने valuation र अरु पेश गरिएका कागजातहरुमा शंका नभएमा सबै जग्गाहरु हरेक स्वीकृत गर्ने कर्मचारीले हेर्न न त ब्यवहारिक छ न संभव नै । हामीले यस्तै एउटा बदमासी पत्ता लगाएर बदमासलाई जेल हालेर मुद्दा चलाएको पनि छौ, अनि म आफै बयान दिन अदालत गएको पनि छु। तर थाहा नपाईदिएको भए अहिले आफू जेलमा हुईन्थ्यो होला।
यी घटनाहरु प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन् । बैंकिङमा यस्ता जाली धितोहरु राखी कर्जा प्रवाह भएका घटनाहरु धेरै छन भने कति अझै थाहै नभएको अबस्थामा पनि होलान।
गाडिको blue book समेत नक्कली बनाई बदमासहरुले कर्जा लिई ठगी गरेका घटना छन् । बदमासले ठगी गरेको थाहा पाई बैंकले मुद्दा हाल्दा उल्टै बैंक कै कर्मचारीलाई समेत कर्जा प्रवाहमा तिम्रो नी हस्ताक्षर छ भन्दै उल्टो बैंकिङ कसुर कर्मचारीलाई नै लगाईदिने कानूनको कारण कति बदमासहरुको बारेमा जानकारी हुँदा नी बैंकहरु चुप बस्नु पर्ने स्थिती छ। यस्ता कसुरमा छानबिन हुँदा दोषी ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ, तर सबैलाई प्रहरी पक्रिने डर र त्रासले घटना सामसुम पारिन्छ।
बैंकरहरु होशियार हुनै पर्ने बेला छ। निम्न 10 बुदा शेयर गर्न चाहे।
1. Blue print र trace आफ्नै कर्मचारी पठायर मगाउने र उ बदमासहरुसँग मिलोमतोमा नभएको ensure गर्ने।
2. Site visit जाँदा आसपास देखिएको मान्छे मात्र होईन आसपासको बासिन्दालाई जग्गा कसको हो ? किनबेच कहिले भएको हो, चलनचल्तीको मुल्य कति पर्छ बुझ्ने र कम से कम2जनाको नाम reference मा राख्ने।
3. पेश गरिएका कागजहरुमा र.नं., मिति, स्केल केहि न केहि तलमाथि परेको हुन्छन। राम्ररी कम से कम शाखा प्रबन्धक र मुख्य कार्यालयमा समेत हेर्ने। हामीले जालसाज पत्ता लगाएको यहि process मा हो।
4. बदमास भन्ने थाहा पाईसकेपछि कागजात फिर्ता दिएर पठाउने होईन। पुलिस बोलाई मुद्दा दायर गराईदिने किनभने उसलाई कारबाही नगरे तपाई त बच्नु भो तर अर्को बैंकलाई फसाउँछ।
5. कर्जा बढाउने pressure मा adequate KYC नगरी, ग्राहकको बास्तविक networth र औकात नहेरी भुलभुलैयामा परी Target को चक्करमा कर्जा बिस्तार गर्न नखोज्ने।
6. कर्मचारीहरु 6,6महिनामा तानातान पारेर2बर्ष,3बर्ष अनुभब नहुदै हामीले शाखा प्रबन्धकको जिम्मेवारी सुम्पिदिन्छौ । ज्ञान कै अभाब छ। Tarining हरु बढाउने।
7.Ethical र moral values को बारेमा पनी मातहतका कर्मचारीलाई जागरण गराउने।
8. Valuator हरुलाई नी समय समयमा बोलाएर छलफल गर्ने। अनुभबीइन्जिनियरलाई मात्रै valuation गर्न पठाउन अनुरोध गर्ने।
9. Fake collateral मा collateral मात्र होईन ब्यापार र मान्छे नी धेरै जसो fake नै हुन्छन। सबै पक्षको राम्रो Analysis गर्ने।
10. शुरुवाती process बाटै राम्रो review गर्ने। फाईल जति माथी गयो review त्यति कम हुदै जान्छ।
यो त चोर शिकारीले खाल्डा खनेर अनी छोपेर हात्ती गैडा खाल्डामा पारे जस्तै भो। रोकथाम जरुरी छ। समय मै बैंकरहरुले यो कानून सम्बन्धमा बहस थालनी गरेर सच्याउन जरुरी छ। नत्र आज या भोली दशा बिग्रीदा साथ पालो आउने कुरा पक्का छ। सहि नियतले जालसाजीमा साझेदार नभई कार्यक्षेत्र अनुसार ईमान्दारीता साथ गराएको काममा यो हदको कारवाहि सम्बन्धमा कानून या प्रकियामा पुर्नविचार हुनै पर्छ। बदमास छुट्नु हुदैन अनि सज्जन फस्नु हुदैन।